Cristiano Ronaldo Oo Ka Tagaya Manchester United Haddii Ay Kooxdu Ku Guul Darreysato Inay Xaqiijiso Booskeeda Champions League.
HomeWararka CiyaarahaCristiano Ronaldo oo ka tagaya Manchester United haddii ay kooxdu ku guul darreysato inay xaqiijiso booskeeda Champions League.
January 20, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ka tagi doono Manchester United xagaagan haddii Red Devils ay ku guuldareysato inay u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda .
Kooxda Ralf Rangnick ayaa haatan ku jirta kaalinta 7-aad ee kala saraynta horyaalka premier League iyaga oo shan dhibcood ka dambeeya kooxda kaalinta 4-aad ku jirta ee West Ham United iyada oo laba kulan u hartay Hammers.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale ku jira tartanka afarta sare, Spurs oo ku jirta kaalinta lixaad ayaa labo kulan u heysata Man United.
Sida laga soo xigtay The Sun, wakiillada Ronaldo ayaa si cad ugu sheegay madaxda sare ee Old Trafford in xiddiga heerka caalami ee dalka Portugal uu dhaqaaqi doono xagaagan haddii aysan jirin wax kubad Champions League ah oo ay soo bandhigtay kooxda inta lagu jiro xilli ciyaareedka 2023-23.
Warbixinta ayaa sheegeysa in 36-sano jirkaan uu ka walaacsan yahay inuu soo afjaro waayihiisa ciyaareed isagoo aan koobab badan qaadin sababo la xiriira Man United.
Ronaldo, oo Manchester qandaraas kula jira ilaa June 2023, ayaa dhaliyay 14 gool 21 kulan oo uu u saftay Manchester United tan iyo markii uu kooxda kaga soo laabtay Juventus.
Tababaraha reer Portugal ayaa dhaawac ku seegay labadii kulan ee ugu dambeeyay Man United ay la ciyaartay Aston Villa laakiin waxa uu dib ugu soo laabtay kooxda kulanka Arbacada ee Premier League ee Brentford.